Wararka - BARNAAMIJKA CHANGYU-HW – Soo-saare xirfadle ah oo ka soo jeeda Shiinaha
CHANGYU-HW WOOD waa shirkad ku takhasustay naqshadeynta, soo saarista iyo soo saarista noocyo kala duwan oo plywood ah, filim soo wajahay plywood, LVL iyo wixii kale oo plywood ah. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa gawaarida gudaha gudaha, sameynta alaabta guriga, qalabka dhismaha, sariirtaada, iyo shirkadaha kale ee la xiriira.
Waxay kuxirantahay faa iidada salka plywood-ka iyo sida waafaqsan xaaladaha gudaha, badeecada dib ayaa loo isticmaali karaa marar badan. Sidaas darteed, waxsoosaarkayagu si fiican ayaa looga iibiyaa Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska, Australia, Kanada, Ameerika, Japan, Ingiriiska, Bariga Dhexe IWM. Celceliska mugga dhoofkeennu waa inta u dhexeysa 3 ilaa 5 kun oo mitir kuyuubik bishiiba. Kordhinta macaamilkeena ganacsi iyo kordhinta suuqa adduunka, CHANGYU-HW WOOD waxaa loo isticmaalay in lagu daboolo baahiyaha horumarineed ee shirkadeena iyo kor u qaadida awoodayada adeega macaamiisha iyo howlaha ganacsi.
Kobaca degdegga ah ee dhaqaalaha Shiinaha wuxuu noqday xoog jiid si loo dhiirrigeliyo baahida loo qabo suuqa plywood.
Alwaaxda ka imanaya kaymaha si dhakhso leh u koraya ugana soo baxa badan ee Waqooyiga Shiinaha, Bariga Shiinaha iyo bartamaha iyo hoose ee wabiga Yangtze ayaa ku soo fatahay suuqa tiro aad u tiro badan, iyo sidoo kale kaabis joogto ah oo alwaax ballaadhan oo tayo sare leh oo dibadda ka yimid, bixinta alaab ceeriin fara badan oo loogu talagalay horumarka joogtada ah ee warshadaha Shiinaha ee plywood. Shandong iyo waqooyiga Jiangsu, sida Xuzhou, waxay noqdeen meelaha ugu badan ee wax lagu soo saaro ee plywood.
Kheyraadka aadanaha oo ku filan sidoo kale waa qodob muhiim u ah xisaabinta kharashka warshadaha plywood-ka Shiinaha marka la barbar dhigo dalalka kale ee soo saara dhirta.
Tayada badeecada Shiinaha ee plywood lafteeda ayaa sidoo kale si weyn kor loogu qaaday, taasoo ka dhigeysa mid sii kordheysa ee loo tartameysa suuqa caalamiga ah.
Shiinuhu kaliya maahan dhoofinta weyn ee plywood, laakiin sidoo kale waa soo saaraha ugu weyn adduunka ee plywood.
Ku soo dhawow ganacsatada gudaha iyo ajaanibta inay u yimaadaan si ay ugala hadlaan iskaashiga, waxaan sidoo kale rajeyneynaa in hibada bulshada iyo dadka aragti ku soo biiraan shirkadeena, si loo dhiso shaqada weyn ee Hongwei.